အပိုင်း II - လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသူများနှင့်လိင်မဆက်ဆံသူများအားအထီးကျန်သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်အကြမ်းဖက်သူနှင့်ဆိုးသွမ်းသောလူငယ်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများ - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုအုပ်စုလိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
J ကိုကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2012;21(3):315-26. doi: 10.1080/10538712.2012.675421.
Leibowitz GS1, Burton DL, Howard တစ်ဦးက.
ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သောစာတမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသူများနှင့်လိင်မဆက်ဆံသောလိင်မတော်မတရားပြုခံရသူအထီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်အကြမ်းဖက်သူ (Burton, Duty, & Leibowitz, 2011) ၏ကွာခြားချက်များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်သားကောင်အုပ်စုတစ်စုကိုပိုမိုပြင်းထန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents (ဥပမာ, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှု) နှင့်အမူအကျင့်အခက်အခဲများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်, arousal, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် nonsexual ပြစ်မှုများ) ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်သားကောင်နှင့် nonsexually nonsexually သားကောင်ဆိုးသွမ်းလူငယ်တစ်စုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက် sexual abuse သားကောင်နှိုင်းယှဉ်။ တွေ့ရှိချက်ဆိုးသွမ်းလူငယ်နှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များကိုထက်နည်းပါးလာအမူအကျင့်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်သားကောင် sexual abuse စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံအပေါ်အမြင့်ဆုံးယုတ်ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနနှင့်ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုတွေကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။